Mini Motor Racing, fifaninanana hazakazaka an-tserasera | Androidsis
Mailen bravo | | Lalao Android
Un lalao hazakazaka vaovao dia tonga amin'ny Android mba hanolotra ny dia mahafinaritra indrindra amin'ny rafitra fiasa Google. Ny lohateny vaovao dia antsoina hoe Mini Motor Racing ary ahafahantsika mifehy fiara kely amin'ny hazakazaka mahafinaritra indrindra amin'ny karazan-javatra rehetra: rava, ala, tendrombohitra, volkano ary maro hafa.
Mini maotera hazakazaka manana fiara 18 hitondra, ary manana ihany koa menio fanamboarana feno mifidy karazana loko sy kojakoja rehetra. Hazakazaka Mini Motor Racing dia atao amin'ny boriborintany 20 samihafa izay misy tsingerina andro aman'alina.
Ny fanahin'ny Mini Motor Racing dia manavotra ny hazakaza-tsoavaly fanaraha-maso lavitra, miaraka amin'ny fahafaha-miampita sary tsy azo tanterahina amin'ny hafainganam-pandeha ary mankafy asa sary tsara vitan'ny mpamorona ny Ny Binary Mill.
Ny kinova ankehitriny dia 1.0 ary miasa amin'ny telefaona finday misy Android 2.3.7 na avo kokoa. Mitentina 1,55 euro ny lalao ary manolotra mety tsy manam-paharoa ho an'ireo izay te hankafy ny fiara sy ny faritra rehetra indray mandeha: mandoa mba hamoha.
Ho an'ireo izay tia fanamby, ny mamoha fiara sy ny scenario dia miankina amin'ny fanatratrarana tanjona samihafa amin'ny maodin-dalao 3. Mini Motor Racing dia misy a Maody momba ny asa miaraka amina tompon-daka roa samy hafa, ny Tompondaka Erantany tamin'ny hazakazaka 120 ary ny Tompondakan'ny Bonus an'ny 92. Ny fandresena tsirairay dia ahafahantsika mahazo vola hanovana ny fiantsika.
Ny iray amin'ireo maoderina mahatsikaiky indrindra dia ny an'ny hazakazaka amin'ny Internet, afaka milalao miaraka amin'ny namana na olona 4 manerana an'izao tontolo izao. Manararaotra ny fifandraisana Wi Fi an'ny ankamaroan'ny finday avo lenta tato ho ato, Mini Motor Racing no fomba tsara indrindra ahafahana mihazakazaka amin'ny hazakazaka na aiza na aiza ary tsy misy fahasarotana avy amin'ny fiononan'ny telefaona.
Ho toy ny bonus, ny lalao dia ahitana zavatra isan-karazany ary mandohaleha amin'ny lalao malaza hafa amin'ny Android: Fruit Ninja. Raha anisan'ireo mpankafy korontana sy fanimbana voankazo isika dia hahita maso sy fiara isan-karazany entanin'ny singa sasany amin'ny lalao manapaka voankazo mahay amin'ny fàfana.
Raha tianao ny lohateny hafainganam-pandeha sy fifaninanana, ny lalao android vaovao Mini Motor Racing dia tsy tokony hanjavona amin'ny fanangonana anao, ary amin'ny vidiny sarobidy kokoa dia afaka mankafy sary mahafinaritra sy fifaninanana an-tserasera mahaliana indrindra amin'ny Android izahay.
Fanazavana fanampiny - Aiza ny ranoko? lalao ankamantatra miaraka amin'ny tombo-kasen'i Disney
Loharano - AndroidGamesRoom
Ampidino - Mini maotera hazakazaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mini Motor Racing, hazakazaka marobe amin'ny Android